အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: မြေပေါ်မြေအောက် ရတနာများ
24 Responses to “မြေပေါ်မြေအောက် ရတနာများ”
"မည်မျှပင်အဖိုးတန်သော ရတနာပင်ဖြစ်စေ တန်ဖိုးမထား မထိန်းသိမ်းတတ်သူများ လက်ထဲတွင်တော့ တန်ဖိုးမဲ့ဖြစ်ရတတ်လေသည်။"
အဲဒါ အမှန်ပဲ ချောရေ ... သူခိုး နွားကောင်းမှန်း မသိဘူး ပြောရမလား၊ မျောက်လက်ထဲ ပတ္တမြားရောက်တယ် ဆိုရမလား ... တန်ဖိုးမသိတော့ တန်ဖိုးမထားဘူး၊ တန်ဖိုးမဲ့အောင် လုပ်ရက်ကြတာလေ ... ။
နောက်ဆုံးတော့ ဖွတ်မိကျောင်းဖြစ် မြစ် မချမ်းသာ ဖြစ်ရတာပေါ့ ... ပြောရင်းနဲ့ စကားပုံတွေ ပါကုန်ပြီ။ :)
နောက်ဆက်တွဲ ပို့စ်ကို မျှော်နေပါမယ်။ လေယာဉ်ပေါ်က မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံလေးတွေ သဘောကျတယ်။
. . လင်းခေတ်ဒီနို . . said...
မချောရေ . . . ဖားကန့် ကုန်နေပီ . . .း( ၀မ်းနည်းသည်
လေယာဉ်ပေါ်ကနေ မြစ်ကြီးဧရာကို မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းပြီးတော့ ဖားကန့်မြင်ကွင်းလေးတွေ စောင့်မျှော်နေမယ် အမချော။
ဧရာဝတီဖြစ်ကြီးကို လေယဉ်ပေါ်က ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ ကြည့်လိုက်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
မချောရဲ့ တစ်ချို့ပိုစ့်တွေမှာ ပါခဲ့တဲ့ ဖါးကန့်ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲခဲ့တာ အမှန်ပါပဲ။
ခုလို ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ ရေးတော့ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်၊
အခုလို ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို မြင်လိုက်ရတော့ ၀မ်းသာကြည်နူးမိသလို တစ်ပြိုင်တည်း ၀မ်းနည်းမှုကိုပါ ခံစားလိုက်ရတယ်။
ရွှေတစ်ပိသာ အမွေရတဲ့ ဥပမာပေးပုံကိုတော့ အတော်လေးသဘောကျမိတယ်။ ကွက်၂ကွင်း၂ မြင်သွားစေတယ်။
ဖားကန့်အကြောင်းကိုလည်း သိရတာ တကယ်စိတ်မကောင်းဘူးမမ...:(
ဖားကန် ကုန်နေပြီ.. ချော တို့ ရွှေစင်ဦး တို့ မေဓါဝီ တို့တော့ ရှိသေးတယ်
ဘာမှတော့ မပြောလိုတော့ပါ... စိတ်တော့ အတော်ကို မကောင်းဘူးဖြစ်နေပါ၏..း((
တင်ပြလေး ပြောင်းလိုက်တာ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသွားတယ်။ ဧရာဝတီကို လေယာဉ်ပေါ်ကနေ စီးရိုက်ပြထားတဲ့ စိတ်ကူးလေး သဘောကျတယ်။ ကိုအောင်မော်နဲ့ ကိုကျော်စွာလိုပဲ ရင်ထဲ မွန်းကြပ်လို့နေတယ် ချောရေ..။
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို အပေါ်စီးက တွေ့လိုက်ရတာ တမျိုးကြီးခံစားရတယ်။ ခုလိုအများသိအောင် ရေးပေးတဲ့ မချောကို လေးစားပါတယ်။
မချော လေယာဉ်ပေါ်ကမြင်ရတဲ့ပုံလေးတွေ လှလိုက်တာ။
မြစ်ကြီးကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက်ာစီးနေတာများ။ သူမို့လို့ကွေ့လည်းကွေ့နိုင်တယ်။ :)
ဖားကန့်မြင်ကွင်း ကို စောင့်ဖတ်ဦးမယ်။
တွေးမိတိုင်း ရင်နာမိတယ် ချောရေ။ တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်းတော့ မသိဘဲ မနေလောက်ဘူး။ သိသိလျက်နဲ့ မိုက်မဲနေတဲ့လူတွေပါလား။ ဒီအကြောင်းကို ဖတ်ပြီးတော့ အောင်မော်တို့လို သက်ပြင်းချမိနေပါသေး၏။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေစေ၊ ချောလည်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။
အခုလို တင်ပြထားတာ အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်။ အပေါ်က ကွန်မန့်တွေအတိုင်း ဂျာနယ်ထဲကို ပို့ကြည့်ပါလား..။ အခုလို ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးတွေကို ပြည်သူအများ သိရတော့ပေါ့..
လောဘဖျက်လို့ ပြည်ပျက်တယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့ အစ်မရယ်...ထိန်သိမ်းမှုကညံ့...တောင်ပြောမြောက်ပြော တွေကများ...အနိုင်ကျင့်ခံရမှုတွေကလည်း အပြည့်...ဒီကြားထဲ အသိကပါနည်းတော့ ပိုဆိုးတယ် :(
ချောာာာာာာာာာာနှမရေ တူလက်တွဲကာ ဧရာဝတီအရေး ဆင်နွဲဖို့။။။။။။။။။။။။ဖားကန့် မိုးကုတ် သပိတ်ကျင်းးးးးးးးးးးမိုင်းးရူးးးးးးးးးးကုန်တာကြာပေါ့။ ဧရာကိုတော့ မကုန်စေချင်ဘူးးးးးးးးးးးးးးမျှော်နေမယ်
ဓါတ်ပုံလေးတွေကြောင့် ဧရာဝတီ နှင့်အတူ
မြန်မာပြည်ရဲ့ အလှကိုပါ ထပ်ပြီခံစားလိုက်ရတယ်။
ဧရာဝတီရဲ့ အားအင်မျိုးက ဒီလိုနဲ့ပြီးရိုးထုံးစံ ရှိမယ်မထင်ဘူး။
မချော ပြောတဲ့ မြေပေါ်မြေအောက်ရတနာဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီရတနာတွေက ကုန်တော့မယ်။ မြေအောက်က ရတနာကုန်တော့မယ်ဆိုတော့
နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေ ဦးနှောက်မှရှိရဲ့လားလို့ မေးကြည့်ချင်တယ်။
ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာတွေ များလာလို့ သူများတိုင်းပြည်က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးတွေ လုပ်နေကြတယ်။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကတော့ ဖျက်ဆီးနေတာ အားမရသေးဘူး။ ရောင်းတောင်ရောင်းစားနေတယ်
တိုင်းပြည်ကို ဖျက်နေတဲ့ ပြည်ဖျက်သမားတွေ
ဧရာဝတီကို အပေါ်စီးကနေမြင်ရတဲ့ရှုခင်းက တကယ့်ကိုရင်သပ်ရှုမောစရာ.. ရင်မောတယ် ရင်နာတယ် နှမြောတယ် စိတ်မကောင်းဘူး ယူကြုံးမရဖြစ်မိတယ်... ခံစားချက်တွေလည်းကုန်သလောက်ဖြစ်နေပြီ။ ရင်ထဲက တကယ့်ခံစားချက်ကို ဖေါ်ပြနိုင်တဲ့စကားတွေလဲ ကုန်နေပြီ။ ဘာပြောရမှန်းကိုမသိတော့လောက်အောင်ပါပဲချောရေ....း((
ြPop up Box ပေါ်လာလို့ အခုမှပဲ ကော်မန့် ပေးလို့ ရတော့တယ်
ဖားကန့် အလှတွေပျောက်ပျက်သွားမှာ စိုးရိမ်မိတယ် မရေ
ကျွန်တော်တို့ မြေပေါ်မှာ သယံဇာတတွေ ကုန်သလောက် ဖြစ်နေပြီဆိုတာ သိရတော့ တကယ် နှမြေမိတယ်...
ခံစားရတယ် .. နှမြောတယ် .. ဒေါသထွက်တယ် ..း((